ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “တာဇံကို မြို့ပေါ် ခေါ်ကြမယ်”
အင်မတန်မှ မှန်ကန်ထိရောက်သော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
တစ်ချို့ ပညာရှိဟု အမည်တွင်သောသူတို့သည် ငါ မာန်တက်ကာ အမှန်တရားကို မမြင်ကြကုန်။
အင်္ဂလန်မှာကျောင်းထားမယ်ဆိုလို့ တာဇံ အပြေးလာတာပါ။ နောက်မှာ နွားအုပ်နဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ တောထဲပဲ ပြန်တော့မယ်...
ကိုပေါ ခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့ ဥပမာကို သဘောကျတယ်...
အမှန်မှာ ဒီကောင်တွေက ဒီမိုမကရေစီရင် မရတော့လို့ လိုက်ပြီး ဒီမိုကရေစီနေရတာပါ... အမှန်က ဒီမိုကရေစီ ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှန်းတောင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က မသိကြရှာပါဘူး...
လက်နက်နဲ့ အုပ်ချုပ်ရတာ ပိုလွယ်တယ်လေ... ကျောင်းမှာ ဆရာက ကြိမ်လုံးကိုင်ထားသလိုပေါ့...
Hote par pe Ko paw yay,
In football term, army is going to score goal, but we still dont know what to do. Just quarrel and fight each other. :P
Hi Anon, yes, army is going to score the goal but it is " luu kyuun ball" :D
ဒီမိုကရေစီကို ကျင့်သုံးနေတဲ့ နိုင်ငံတွေကလည်း ဟိုတုန်းက လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖေါက်ပြီး လုပ်ချင်ရာ လုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေပါပဲ၊ ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေကသာ အဲဒီလူတွေဆီက စနစ်တကျ စည်းကမ်းရှိရှိ အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ ကောင်းတဲ့အမွေမနစ်ကို ဘာတခုမှ မယူထားခဲ့ပဲ မကောင်းတဲ့ တရားခံညှင်းဆဲနည်းတွေကိုပဲ ယူထားခဲ့ပြီး နောက်မျိုးဆက်ကိုလည်း ကိုယ်နဲ့ နည်းနည်း အမြင်မတူတာနဲ့ သတ်ဖို့ ဖြတ်ဖို့ ညှင်းဆဲဖို့ စိတ်ဓါတ်ကိုပဲ အမွေပေးနေလို့ မြန်မာပြည်က အခုလောက် နှိပ်ကျနေတာပါ။